News - Efere na tube Integrated laser ọnwụ igwe
Efere na tube Integrated laser ọnwụ igwe
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọganihu sayensị na nkà na ụzụ na ọganihu nke mgbanwe mmadụ nke ụwa na ịchụso ndụ ka mma, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ka na-etolite ngwa ngwa.Ka ọ dị ugbu a, ahịa ahịa maka ngwaahịa ígwè na-abawanye ụba mgbe niile, na ahịa nhazi nke ihe ndị dị na pipụ dị nnọọ ukwuu. Ụdị nhazi omenala enweghị ike imezu ihe ndị ahịa chọrọ nke mmepe ngwa ngwa na mmepụta ego na-echekwa ego, na-enweghị ọnụahịa, arụmọrụ. , mma, nchebe gburugburu ebe obibi, n'otu oge ahụ na-arụ ọrụ nke ịkpụ efere na tube integrated laser ọnwụ igwe bụ ihe na-ewu ewu karị, okpomọkụ ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu, ọchịchọ na-adịwanye elu.
APEXCNC laser na-arụ ọrụ n'ọhịa nke ịcha laser ruo ọtụtụ iri afọ, na-elekwasị anya na isi mkpa nke ndị ọrụ, chọrọ ndị ahịa mkpa na maka ndị ahịa, ma na-etinye ndị ọrụ mgbe niile. Iji nyere ndị ọrụ aka dozie ịkpụ n'out oge, mmepụta nke APEXCNC dị elu. GT-usoro laser cutter iji nweta njikọ zuru oke nke ọsọ, ogo na ọnụahịa.
1. Nhazi efere kaadị
N'ihu na azụ diski mwekota imewe, okpukpu abụọ diski mwekota, adaba echichi na ọrụ ịzọpụta, nkwado mkpọda mkpọda, adabara ụdị ọ bụla nke oge ụfọdụ ọkpọkọ oyiyi akwa, ọ dịghị oriri na eyi, iji hụ na nkwụsi ike nke ihe nnyefe na ọnwụ ziri ezi.Automatic mezie etiti. , ọsọ ntụgharị diski, nwere ike melite arụmọrụ nhazi.
II.Dual-ikpo okwu ngwa ngwa mgbanwe usoro
N'iji ụgbọ okporo ígwè ama ama nke mba ụwa, rack, moto, reducer dị ka ihe na-ebufe usoro ihe, nhazi ikpo okwu dị elu na-agbanwe agbanwe, mgbanwe bench abụọ n'otu oge, usoro nnyefe ezi uche dị na ya, ọnọdụ nnyefe kwụsiri ike, ntụkwasị obi na ịrụ ọrụ nke ọma, belata oge mgbanwe, chekwaa oge inyeaka. , ugboro Ntụgharị njikwa mgbanwe moto, igwe ngwá ọrụ kasị ọsọ ọsọ n'ime 10S mgbanwe.
Atọ, nkedo aluminom doo
A na-arụpụta aluminom ụgbọ elu site n'ụkpụrụ ikuku.Mgbe njedebe ntuziaka na ọgwụgwọ ngwọta siri ike, ike nke crossbeam nwere ike iru T6, ọ nwekwara njirimara nke nkwụsị nke corrosion, nkwụsị nke oxidation, siri ike na ezigbo ductility. Light arọ, dị mfe nhazi mgbe mmegharị ọsọ ọsọ, n'otu oge ahụ. oge nwere njirimara mgbanwe dị ukwuu, n'ihe banyere izute izi ezi, nwere ike imeziwanye ọsọ nhazi.
IV.Efere ịgbado ọkụ akwa imewe ahụ
High mma carbon ígwè efere na-welded na mụ Ọdịdị, elu okpomọkụ annealing ọgwụgwọ ikpochapụ nrụgide site ịgbado ọkụ. Plate ịgbado ọkụ bed ahu ebelata ọnwụ nke laser ọnwụ igwe na-eji, iji hụ na ogologo oge na ike ọrụ nke akụrụngwa. .
V. Mmelite nke akụrụngwa nkwado
1. Isi laser na-arụ ọrụ na-elekwasị anya na-akpaghị aka, a ga-edozi ihe na-elekwasị anya na-akpaghị aka, dị mma maka ụdị anya dị iche iche na-elekwasị anya, na-enweghị ọrụ ntuziaka, dị mfe, ngwa ngwa na nke ziri ezi. Usoro na-akpaghị aka na-achọpụta nhazi nke nrịbama ma gbanwee ọrụ ịkpụ tube efere efere. n'enweghị nsogbu na ntụkwasị obi.
2. Nchekwa zuru oke nke humanized imewe, mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi laser zuru oke, iji gbochie mmebi laser nke ndị ọrụ;uzuzu akpaka usoro nhazi usoro nchịkọta, ịkpụ uzuzu n'ime ime nzacha ọgwụgwọ, ọkọlọtọ ikuku, mee ka usoro ahụ dịkwuo nchebe gburugburu ebe obibi, enweghị mmetọ;nhazi usoro nlekota nke ọgụgụ isi, nleba anya nke ọgụgụ isi oge, belata ihe mberede nke ihe mberede.
3. Mbelata dị ala ma chekwaa ego, meziwanye ndụ ọrụ nke igwe, APEXCNC laser GT usoro laser ọnwụ igwe na-ejikọta efere ịkpụ, ịkpụ ọkpọkọ, nwere ike ịhazi ụdị ihe dị iche iche nke ígwè na ihe dị iche iche nke ọkpọkọ, efere, nke ọma na-ejikọta ya, na-arụ ọrụ nke ọma na ike. -azọpụta imewe nwere ike ukwuu ịzọpụta cost.Full nwere ọgụgụ isi CNC usoro, mmadụ-igwe mgbanwe ọrụ interface, mfe ọrụ, abụọ sprocket Ọdịdị ndụ bụ ogologo, ike mgbanwe track adaptability, ala mmezi ogo nke mmezi, mfe mmezi, mfe na-amalite.
A na-ejikarị eme ihe, iji nyere aka mmepụta
Efere tube integrated laser ọnwụ igwe ihu ọma na-ekpuchi ụdị nile nke metal ụlọ ọrụ, na mpempe akwụkwọ metal, ọla, iko, n'ibu ngwá, ọkụ, kichin na ụlọ ịwụ ngwaahịa, nkwurịta okwu, dijitalụ ngwaahịa, electronic components, clocks, kọmputa ngwa, ngwá, nkenke ngwá, ngwaike ebu, akpaaka akụkụ, usoro onyinye na na ọtụtụ-eji na ọtụtụ ụlọ ọrụ.
APEXCNC GT-usoro efere tube integrated laser ọnwụ igwe na-enye ndị ọrụ na àgwà ojiji ahụmahụ, na anụ akụrụngwa, ike ọnwụ, elu na-eri arụmọrụ na magburu onwe arụmọrụ emewo ndibọhọ mmadụ-kọmputa mmekọrịta otuto si ahịa na users.It na-aghọta zuru okè mwekota nke ọsọ na ịdị mma, na-eme ka nrụpụta ọrụ nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe na-arụ ọrụ nke ọma, gbasaa ma gbasaa ọnọdụ nhazi nke ndị ọrụ, ma na-ewetara ndị ahịa ahịa ahịa.
Oge nzipu: Dec-08-2021